China Ukushicilelwa Okuphansi Kwe Tshirt China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ukushicilelwa Okuphansi Kwe Tshirt - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ukushicilelwa Okuphansi Kwe Tshirt)
I-A1 A2 i-A3 Indwangu Isigqoko Iphrinta ye-Tshirt iyindlela entsha yokwenza ubuciko esandleni sokudweba, zonke izinhlobo zokunyathelisa ukudlulisa, ubuchwepheshe bokunyathelisa kwesikrini. Sebenzisa inkinobho ye-UV, ngaphandle kwe-T-shirt, esebenzayo cishe zonke izinhlobo zempahla nesithombe kungaba nombala oqondile...
I- Custom T Shirt Ukushicilela uhlobo lwe-ink-jet uhlobo lokushicilela oluphezulu lwe-digital-tech imishini yokunyathelisa yedijithali esebenza into engeyona yokuxhumana, insimu yesicelo sayo ibanzi kakhulu, i- T Shirt Printing Design iyindlela emisha yezobuchwepheshe eminwebeni yezandla, zonke izinhlobo...
Ukunyatheliswa kwe-UV e-Chennai
Iphrinta yethu ye- UV Flatbed ithatha uhlelo lokulawula ikhompiyutha yama-axis. Umshini uxhumeke kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhompyutheni, njenge: landscape, uhlamvu, imidwebo yendabuko yaseShayina, imidwebo yamafutha, imidwebo engenasici, ikhalligraphy kanye...
Ukubuyekezwa kwephrinti ye-Sandals Eva Foam
Iphrinta yethu ye- Foam ye-EVA ingaphrinta emdongeni, e-plaster, e-drywall, ekhoneni, e-tile, enkuni, ephahleni, eplastiki, engilazi njll. Sizokunikeza isevisi yokusiza kanye nokunikezwa kwemithengethe kanye nezingxenye ezithengayo ze- A3 UV Printer . Ukubuyekezwa kwe- Sandal Eva Foam Printer Ukuhlolisisa uhlobo...
Ukusekelwa kwephrinta ye-Eva Foam
Ngemuva kwezinyanga eziyi-12 zokuthuthukiswa, i-RFC ijabule kakhulu ukukunikeza nge-Tablet control yokunyathelisa ngokuqondile inkinobho ye- Inkjet UV Printer RF-A3UV Le entsha i- A3 UV Printer yakhiwa ngokusekelwe eminyakeni eyishumi yethu yokufunda emkhakheni we-UV Printing. Iphrinta ihlanganiswe ubunjiniyela...
iphrinta yomshini wokwenza ikhofi
Ukubuyekeza okulula kwe-CD Inkjet Printer
Ukuhlolwa okulula kwe-CD Inkjet Printer Ukubuyekezwa kusetshenziselwa ukuphrinta izithombe kwi-CD ngokuqondile, futhi kungase kube yingxenye yezithombe zokudweba nge-software, futhi kungase kufike ijubane, futhi kungakunika izwe elihle. Ungayithatha ukuhlobisa igumbi lakho lokuphumula, ikamelo lakho lokulala, ikamelo...
Ukuphrinta kwe-Inkjet ecacile ye-Ceramic
I- Direct Ceramic Inkjet Yokunyathelisa Inkinobho A3UV ngumkhiqizo wethu wokuthengisa oshisayo futhi uthunyelwa emazweni amaningi futhi isetshenziselwa umhlobiso, ukukhangisa, umbukiso kanye nokuqala ibhizinisi. Umshini odumile we- Ceiling Tile Printer ungumthengi wethu, singumkhiqizi we- Ceramic Tile Digital Printer...
I-A3 6 Umbala Wezembatho I-Printer Tshirt
Singumshini wephrinta we-multi-function flatbed iphrinta, ithimba lethu loMnyango Wezobunjiniyela linemiphumela engaphezu kweminyaka eyishumi yokusebenza. Le A3 6 Color Textile Printer Tshirt iyinhlangano evumelwane kakhulu kusukela ekutholeni ibhizinisi. Siyakha iphrinta le- Textile T Shirt ukuphrinta ngezinhlobo...
Ukushicilelwa Okuphansi Kwe Tshirt Ukushicilelwa okuphansi kwe-TShirt Ukunyatheliswa komkhiqizo we-Tshirt Ukushicilelwa Kwezinsizi Eziphansi Ukushicilelwa kwe-Shirt T Custom Custom Ukunyathelisa okushicilelwe phansi Umbala womshini wokushicilela we-T-Shirt Umshini wokushicilela we-T-Ishicilelo